जन्डिसबाट पिडित हुँदा भूलेर पनि खानुहुँदैन, यी औषधि – Etajakhabar
जन्डिसबाट पिडित हुँदा भूलेर पनि खानुहुँदैन, यी औषधि
ताजा खबर:- जन्डिस एक यस्तो रोग हो, जसमा विशेषगरि आहारमा ध्यान राख्नु पर्दछ । यदि आहारप्रति थोरै लापरवाही गरेता पनि समस्या बढ्न सक्छ । यस आर्टिकलमा मुम्बई स्थित फोर्टिस हस्पिटल कन्सल्टेन्ट फिजिशियन डा. प्रदिप शाह बताउँदै हुनुहुन्छ कि जन्डिस हुँदा किन केही विशेष कारणले औषधि खानुहुँदैन ।
किन केही विशेष औषधिको सेवन गर्नु हुँदैन?
जब तपाई हेपेटाइटिस या जन्डिसले पिडित हुनुहुन्छ भने त्यस अवधिमा चिकित्सकले एन्टीभाइरल औषधि सेवन गर्नुपर्ने सल्लाह दिने गर्दछन्, जसले भाइरललाई नियन्त्रणमा राख्दै रोग चाँडो निको हुन मद्दत गर्छ । यसको साथै केही यस्ता औषधि पनि छन्, जसले लिभरको कार्यक्षमतालाई बढाउँछ । तर यी सबै बाहेक केही यस्ता औषधि पनि छन्, जो लिभरमा अतिरिक्त दवाव पार्छ र त्यसको कार्यक्षमतालाई खराब रूपमा प्रभावित गर्छ, यसकारण यस्ता औषधिको सेवन गर्नुहुँदैन । किनकी भाइरस पहिले देखि नै लिभर कोशिकालाई नोक्सान पुर्याईरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जब तपाई ती औषधिको सेवन गर्नुहुन्छ भने लिभरमा कामको बोझ बढाउँछ । यसकारण जन्डिसले पिडित रोगीलाई केही विशेष किसिमको एन्टीबायोटिक, पेनकिलर जस्ता औषधि खान नहुने सल्लाह दिने गरिन्छ ।
टीबीको औषधि:- यदि तपाई जन्डिसले पिडित हुनुहुन्छ भने यस्तो अवस्थामा टीबीको औषधि सेवन गर्नुहुँदैन किनकी यसको कारणले हेपेटाइटिस हुनसक्छ र लिभर इन्फेक्शनको खतरा बढ्छ । यसकारण यदि तपाई टीबीको औषधि पहिले देखि नै सेवन गरिरहनु भएको छ र जन्डिस भयो भने सबैभन्दा पहिले चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् र उनीहरूले बताए अनुसार औषधि सेवन गर्नुहोस् ।
पेनकिलर:- यदि तपाई जन्डिसले पिडित हुनुहुन्छ भने यस्तो अवस्थामा पेनकिलरको औषधि कम भन्दा कम सेवन गर्नुपर्दछ । विशेषगरि प्यारासिटामोलको हाई डोज लिनु हुँदैन किनकि यसबाट लिभरमा निकै नकारात्मक असर पर्न सक्छ । केही विशेष अवस्थामा लिभर नोक्सान पनि हुनसक्छ ।
एन्टीबायोटिक:- एन्टीबायोटिक औषधि लिभरमा गई मेटाबोलाइज हुन्छ । यसकारण जब तपाई जन्डिसको औषधि सेवन गर्दै हुनुहुन्छ र यस्तो अवस्थामा एन्टीबायोटिक औषधि सेवन गर्नुहुन्छ भने लिभरमा दवाव बढ्छ, जसको कारण रोग निको हुन बढी समय लाग्न सक्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १६, २०७४ समय: २३:०१:३४